တွင်းအသစ်လေးထဲ – Grab Love Story
ကိုယ်ကလေးကိုဖျော့၊ ကျော့ကိုဆန့်ပြီး ကုလားထိုင် နောက်မှီပေါ် ပုခုံးတင်ထားရင်းမှ လေးလေးနွယ်တစ်ယောက် ခေါင်းကလေးကို ဘယ်ညာယိမ်းကာ အကျောလျှော့နေမိသည်။ လောလောလတ်လတ်မှ ပရင့်အောက် ထုတ်ထားသည့် စာရင်းရှင်းတမ်း ရီပို့သည် စားပွဲခုံ၏ ထောင့်စွန်းတွင် ငြိမ်သက်စွာ လဲလျောင်းလျက်ရှိသည်။ ရင်ကလေး မို့တက်လာသည်အထိ လေကို တစ်ဝကြီး ရှူသွင်းပြီးနောက် ရုံးခန်းပေါက်ဝတွင် ချိတ်ထားသော တိုင်ကပ်နာရီကို လှမ်းကြည့်မိ၏။ နာရီလက်တံက ၈နာရီတိတိ ထိုးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း လေးနွယ် (လေးလေးနွယ်၏ နာမည်အတိုကောက်)ကို လှမ်းအသိပေးသည်။ မဖြစ်သေးဘူး .. ငါ ပြန်မှပဲ .. မဟုတ်ရင် လိုင်းကား ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူးဟု လေးနွယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးလိုက်ရင်း ထိုင်နေရာမှ ထသည်။ ညနေ လေးနာရီ ထိုးကတည်းက လေးနွယ်တို့ တစ်ရုံးလုံး တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းကား ယနေ့သည် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ ချစ်သူများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် valentine day (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ရက်နေ့) ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။ ရည်းစားရှိသူတွေက နေ့လည်ကတည်းက တလှုပ်လှုပ် တရွရွနှင့် ရုံးဆင်းရင်တော့ ဘယ်သွားမည် ဘယ်လာမည်ဆိုပြီး ပြောနေခဲ့ကြသလို၊ အတွဲမရှိသေးသူများကလဲ ညနေကျရင်တော့ ဘယ်သူနဲ့ တွေ့ဖို့ရှိတယ် ဘယ်ဝါနှင့် တွေ့ဖို့ ရှိတယ်ဆိုပြီး ဒိတ်လုပ်နေကြတာကို ကိုယ့်စာရင်းစာရွက်တွေနဲ့ ကိုယ် အလုပ်များနေသော လေးနွယ် နားကြားပြင်းကပ်အောင်ကို ကြားနေခဲ့ရသည်။ လေးနွယ်အတွက်တော့ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးသည် သူမနှင့် မပတ်သက်ခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ တနင်္လာနေ့ ရုံးပြန်ဖွင့်ဖွင့်ခြင်း ဘော့စ်စားပွဲပေါ် အမှီတင်ရမည့် စာရင်းရှင်းတမ်း ရီပို့ကိုထဲကိုသာ အာရုံကို နှစ်ထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို မေ့လျော့ထားလိုက်သည်။ အခု အားလုံးပြီးသွားလို့ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ တော်တော်ကြီးတောင် အချိန်ကလင့်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ရုံးခန်းထဲမှ လေးနွယ်ထွက်လာပြီး ဓါတ်လှေကား ရှိရာ လျှောက်လာချိန်တွင် သူမတို့ အထပ်ရှိ ရုံးခန်းတိုင်းသည် တံခါးပိတ်လျှက်သား ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကြည့်ရတာ အဆောက်အဦး တစ်ခုလုံး သူမတစ်ယောက်ထဲများ ကျန်တော့တာလား မသိ။ လေးနွယ် ပုခုံးတစ်ချက်ကို မသိမသာ တွန့်လိုက်ရင်း ချက်ချင်းဆိုသလို သူမတို့ အထပ်ဆီ ရောက်လာသော ဓါတ်လှေကားထဲသို့ ၀င်လိုက်သည်။ ပထမထပ် ခလုတ်ကို ခပ်သွက်သွက် နှိပ်လိုက်သည်နှင့် ဓါတ်လှေကားက အလိုအလျောက် ပြန်ပိတ်သွားသည်။ ခါတိုင်း ရုံးဆင်းလျှင် အလုအယက် တိုးဝင်ရသည့် ဓါတ်လှေကားထဲတွင် ဒီနေ့တော့ ဘယ်သူမှ မရှိလေရာ တံခါးဘောင်တွင် ကပ်ထားသော မှန်ချပ်ကိုတောင် အေးအေးဆေးဆေး လှမ်းကြည့်လို့ရနေသည်။ ခပ်မိမိပုံစံရှိသော အမျိုးသမီးချောလေးတစ်ယောက်က သူ့ကို ပြုံးတုံ့တုံ့ ပြန်ကြည့်နေတာကို တွေ့ရလေသည်။ ထိုအခိုက် ရုတ်တရက်ဆိုသလို ဓါတ်လှေကားက တင်ခနဲ မြည်ကာ ရပ်သွားပြီး စေ့ထားသည့် တံခါးနှစ်ချပ်က ကွာဟသည်။ မှန်ထဲတွင် မြင်နေရသည့် လေးနွယ်၏ ပုံရိပ်လေး ဗြုန်းဆို ပျောက်သွားပြီး ထိုနေရာတွင် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ၀တ်ဆင်ထားသော ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ ပုံရိပ်က အစားထိုး၍ ၀င်လာသည်။ ထိုပုံရိပ်က ဓါတ်လှေကား၏ အပြင်ဘက်တွင် ရှိမနေပဲ အထဲသို့ ၀င်လာယုံသာမက သူမကိုလဲ လှမ်း၍ ပြုံးပြလိုက်သေးသည်။ “ဆောရီးဗျာ .. ကျနော် လိုက်ခဲ့ပါရစေ “ နှစ်လိုဖော်ရွေဖွယ် အပြုံးနှင့်အတူ ယဉ်ကျေးသည့် စကားကြောင့် ပုံမှန်ဆိုလျှင် စကားနည်းတတ်သူ လေးနွယ်တောင် နှုတ်ခွန်းပြန်၍ ဆက်ဖြစ်သွားသည်။ “ရပါတယ် .. “ “အလုပ်တွေ လက်စသတ်နေရတာနဲ့ဗျာ .. တော်တော်ကြီးတောင် မိုးချုပ်သွားတယ် “ “ကျမလဲ အတူတူပဲ .. “ ထို့နောက်တွင်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဆီမှာ တခြား ပြောစရာ စကားမရှိတော့သည့်အတွက် ဘယ်အထပ်ကို ရောက်နေပြီဆိုသည်ကို ပြသော ဓါတ်လှေကား၏ display panel ကိုသာ နှစ်ယောက်သား ငေးကြည့်နေမိသည်။
ဘာကြောင့်ရယ် မသိ။ လေးနွယ် စိတ်တွေ အနည်းငယ်တော့ လှုပ်ရှားနေမိသည်။ ငြိမ်ငြိမ်လေး ဆင်းသက်လာသည့် ဓါတ်လှေကားက နံပါတ်ခြောက်ဂဏန်းကို ပြသည့်အချိန်တွင် … ရုတ်တရက်ဆိုသလို ဘယ်ကမှန်းမသိ ဒုန်းခနဲ အသံမြည်လာပြီး ဓါတ်လှေကား တစ်ခုလုံး တုန်ခါသည်။ “ အမေ့ !! “ “ဟာ !! “ တိုင်ပင်မထားပဲ အာမေဍိတ်သံတွေ နှစ်ဦးစလုံးဆီမှ အပြိုင် ထွက်လာကြသည်။ ပိုဆိုးသည်က လေးနွယ်။ စီးထားသည်က ဒေါက်ဖိနပ်နှင့်မို့ ကိုယ်ဟန်ပျက်ပြီး ဘေးဘက်ကလူဆီသို့ ယိုင်ကျသွားသည်။ “သတိထား !! “ ကံကောင်းသည်ဟု ပြောရမည်။ သူမ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို မိမိရရ ဖမ်းဆုပ်ကိုင်လိုက်သည့် ကိုလူစိမ်းကြောင့် လေးနွယ် လဲကျသည်တော့ မဖြစ်လိုက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်သည့် အကြည့်နှင့် သူ့ကို မော့ကြည့်လိုက်သည်တွင် ထိုလူက လေးနွယ်ကို ရပါတယ်ဟူသော အမူအယာနှင့် ခေါင်းညိတ်၍ ပြလိုက်ပြီး ကိုင်ထားသည့် ပုခုံးပေါ်က လက်တွေကို ဖယ်ပေးလိုက်သည်။ “ဘာ ဖြစ်တာလဲ .. သိလား ဟင် .. “ “Maintenance လုပ်တာလား မသိဘူး .. ကျနော်အရင်တုန်းက တစ်ခါ ကြုံဖူးတယ် .. “ “ဟုတ်လား .. ဒါဆို ဘာလုပ်ရမှာလဲ … ခက်တော့တာပဲနော် .. “ “ခန .. building maintenance ဆီ လှမ်းခေါ်လိုက်ဦးမယ် ..” ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ဓါတ်လှေကား၏ ဘေးဘောင်တွင် ရှိနေသော အင်တာကွန်းခလုပ်ကို နှိ်ပ်ကာ ခေါ်နေသည်ကို လေးနွယ် လှမ်းတွေ့ရသည်။ လေးနွယ်ကတော့ ဒါမျိုးအဖြစ်ကို ကြုံဖူးသူမဟုတ်လို့ ဘာမှ မလုပ်တတ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းလဲ မသိသဖြင့် ဘေးတိုက်အနေအထားနှင့် မလှမ်းမကမ်းမှ မြင်နေရသော သူ့ကိုသာ စိတ်ဝင်တစားနှင့် ငေးကြည့်နေမိသည်။ သေချာကြည့်မိမှ ထိုလူရွယ်သည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ယောက်ျားတစ်ယောက်မှန်း လေးနွယ် မြင်လာရသည်။ မျက်နှာထား ကျပုံက ယောက်ျားပီသသော ရုပ်ရည်ရှိပြီး အရပ်အမောင်းနှင့် လိုက်ဖက်သော ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် ရှိလှသည်။ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကို ၀တ်ဆင်ထားသဖြင့် သူ၏ ခြေတံတွေ အချိုးကျကျ ရှိနေပုံကို တွေ့နေရသည်။
ကိုယ့်အလုပ်နှင့်ကိုယ် ရှုပ်နေလို့လား မသိ။ လေးနွယ် စိုက်ကြည့်နေသည်ကို ကိုလူချောက သတိမထားမိ။ building maintenanceသို့ ခေါ်ဆိုသည့် ခလုတ်ကိုသာ မလွှတ်တမ်း နှိပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော် တော်တော်လေး ကြာသည့်တိုင် ဘာအကြောင်းမှ မထူး။ ထိုတော့မှ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဟန်နှင့် သူမဘက် ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီး … “မရဘူးဗျာ .. ဘယ်သူမှ လာမကိုင်ဘူး .. ကြည့်ရတာ building ထဲက တခြားနေရာတွေမှာ maintenance လုပ်နေလို့လား မသိဘူး “ “ဟုတ်လား … ဒါဆို ကျမတို့ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ “ “တအောင့်လောက် နေမှ ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ် .. ဘုရား သိကြားမလို့ အဲဒီအချိန်ကျရင် တစ်ယောက်ယောက် လာကိုင်ပါစေဗျား ..” “အင်း .. “ လေးနွယ် ဘာပြောရမှန်း မသိလို့ “အင်း” ပဲ လိုက်မိသည်တွင် သူမ မျက်နှာကို ကြည့်နေသူ ကိုလူချောက စူးစမ်ဟန်နှင့် လှမ်းမေးသည်။ “ချိန်းထားတာများ ရှိနေလား မသိဘူး .. ဒီနေ့ ဗယ်လင်တိုင်းဒေး ဆိုတော့လေ . “ “မ .. မရှိပါဘူး .. ဗယ်လင်တိုင်းဒေး မှတ်လို့ မဟုတ်ဘူး .. ရှိကို မရှိတာ .. “ “အော် .. “ “ကဲ .. မထူးတော့ပါဘူး .. ရှင်နဲ့ ကျမ ဒီထဲမှာ ဆက်နေရမှတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မိတ်ဆက်ကြရအောင် .. ကျမနာမည် လေးလေးနွယ်ပါ .. ၁၇ထပ်က နေလရောင်ကုမ္ပဏီ က “ “ဟုတ်ကဲ့ .. ကျနော် နေမျိုးပါ … ၁၁ထပ် ထွန်းအိတ်စပို့ အင်ပို့ ကုမ္ပဏီ ကပါ .. တွေ့ရတာ ၀မ်းသာတယ်လို့တော့ မပြောတော့ဘူး မလေးလေးနွယ် ရေ .. ဟင်း .. ဟင်း ..” “ရပါတယ် … ကိုနေမျိုး ..မပြောပါနဲ့ .. နောက်ပြီး ကျမကို လေးနွယ်လို့ပဲ ခေါ်ပါ ..လေးလေးနွယ်ရဲ့ အတိုကောက်ပေါ့ .. နောက်ပြီး ရှေ့က မတပ်မခေါ်ပါနဲ့ .. မတပ်ခေါ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသက်ဆယ်နှစ်လောက်ကြီးသွားတယ် ခံစားရလို့ … “ “အတူတူပဲ .. လေးနွယ် .. ကျနော့်ကိုလဲ နေမျိုးလို့သာ ခေါ်ပါ ..” …… “မှန်တယ် .. အဲဒီ အဖြေမှန်တယ် “ လေးနွယ်ဆီမှ အတည်ပြုသံထွက်လာပြီးသည်နှင့် နေမျိုးတစ်ယောက် ဓါတ်လှေကား ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ချထားသော လက်ဆွဲအိတ်ပေါ်မှ မြေပဲတစ်စေ့ကို ကောက်ကာယူလိုက်သည်။
လေးနွယ်နှင့် သူ သဘောတူထားသည့် ထုံးစံအတိုင်း မြေပဲစေ့ကို လေထဲ မြှောက်လိုက်ပြီး ပြန်အကျတွင် ခေါင်းကိုမော့၊ ပါးစပ်ကို ဟ၍ ဖမ်းယူသည်။ ပါးစပ်ထဲ တိုက်ရိုက်ဝင်သွားသည့် မြေပဲစေ့ကို တထောက်ထောက် ၀ါးလိုက်ရင်း သူ့အလှည့်ကို စောင့်နေဟန်ရှိသည့် လေးနွယ်ဘက်သို့ လှမ်းကြည့်သည်။ “ကဲ .. ဒီတစ်ခါ .. ကျနော် မေးရမယ့် အလှည့် .. “ Building maintenance ဆီသို့ နောက်ထပ်တစ်ခါ ခေါ်ပြီးသည့်တိုင် ဘာအဆက်အသွယ်မှ မရသည့်အတွက် လေးနွယ်နှင့် နေမျိုး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မျက်နှာမူ၍ ဓါတ်လှေကားထောင့်ကို ကိုယ်စီမှီကာ ထိုင်နေကြတာ ဖြစ်သည်။ ထိုင်နေရင်းမှ အချိန်ဖြုန်းသည့်အနေနှင့် ဂိမ်းသဘောမျိုး တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အမေးအဖြေလုပ်ရင်း လေးနွယ်ဆီမှာ ပါလာသည့် မြေပဲထုပ်ကို ဖောက်စားနေခဲ့ကြသည်။ သူတို့ ဆော့နေသည့် ဂိမ်းပုံစံက တစ်ဖက်က မေးခွန်းနှစ်ခုမေးပြီး ဖြေရမည့်သူက ထိုမေးခွန်းနှစ်ခုစလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော အဖြေတစ်ခုထဲကိုပဲ ပေးရန်ဖြစ်သည်။ “မေးပြီ .. လေးနွယ် .. တချို့ ရောဂါသည်တွေက အသားမစားဘူး .. တချို့အဆိုတော်တွေက သီချင်း မဆိုဘူး ..” “အော် .. ဒါလား “ “ဟုတ်တယ် .. အဲဒါပဲ .. ဖြေနိုင်ရင်ဖြေ .. “ “ဟွန့် .. ဒါများ ဘာခက်တာ မှတ်လို့လဲ “ ရယ်ကျဲကျဲ လုပ်နေသည့် နေမျိုး၏ မျက်နှာပေးကို အမြင်ကပ်ကပ်နှင့် မျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်ပြီးမှ သူမ စဉ်းစားထားသည့် အဖြေကို ပေးလိုက်၏။ “ရောဂါသည်တွေ အသားမစားတာရော၊ အဆိုတော်တွေ သီချင်းမဆိုတာရောက တခြားကြောင့် မဟုတ်ဘူး .. လည်ချောင်းနာနေလို့ .. “ “ဟာ .. ! “ ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားသည့် နေမျိုးပုံစံကို မြင်ကတည်းက သူမ အဖြေမှန်သွားမှန်း လေးနွယ်သိပါသည်။ ခပ်သွက်သွက်ပင် သူမတို့ နှစ်ယောက်ကြားတွင် ရှိနေသော နေမျိုး၏ လက်ဆွဲအိတ်ပေါ်ရှိ အပုံထဲမှ မြေပဲတစ်စေ့ကို ကောက်ယူသည်။ ထို့နောက် သူလုပ်သလို လေထဲကို မြောက်တက်သွားအောင် မြှောက်လိုက်ပြီး အကျတွင် ပါးစပ်လေး အသင့်ဟထားလိုက်သည်။ အံဝင်ခွင်ကျ မြေပဲစေ့ ၀င်သွားသည့်နောက် မော့ထားသော ခေါင်းကို ပြန်ငုံ့လိုက်စဉ် သူမကို အကြည့်စူးစူးနှင့် စိုက်ငေးနေသော နေမျိုးကို တွေ့ရသည်။ သူ့အကြည့်က ရိုးရိုးမဟုတ်ပဲ ညို့ ငင်ရီဝေနေရာ လေးနွယ် ရင်ထဲ ဒိတ်ခနဲ ခုန်သွားသည်။
အလိုလိုနေရင်း ကိုယ်လေးက နွေးတက်လာပြီး စိတ်ထဲလဲ ဟိုလိုလိုဒီလိုလို ဖြစ်လာသည်။ မဖြစ်တော့ဟု တွေးမိပြီး လည်ချောင်းကို ကမန်းကတမ်း ရှင်းရင်းမှ .. “ကျ .. ကျမတို့ maintenance ဆီ ပြန်ဆက်ကြည့်ရင် ကောင်းမယ်နဲ့ တူတယ် .. “ မသိမသာ တုန်နေသော အသံကို ထိန်းကာပြောလိုက်သည့်အပြင် လုပ်မိလုပ်ရာ အဖြစ် ပုဆစ်တုပ်ထိုင်နေရာမှ လေးနွယ် ထရပ်လိုက်သည်။ ဖြစ်ချင်တော့ အချိန်တော်တော်ကြာ ပုံစံ မပြောင်းပဲ ထိုင်ထားမိသည့်အတွက် ဘယ်ဘက်ခြေထောက်က ကျင်နေရာ ကိုယ်ကလေး ယိမ်းပြီး ရှေ့ကို ငိုက်ကျသွားသည်။ “လေးနွယ် ရလား .. “ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်အဖြစ် သူ့ဘက်ယိုင်ကျလာသော လေးနွယ်ကိုယ်လေးကို နေမျိုးက ဖမ်းထိန်းပေးလိုက်ပါသည်။ သို့သော် အခုအချီတွင် မတော်တဆဟုပဲ ပြောရမလား၊ တမင်တကာဟုပဲ ဆိုရမလား မသိ။ လှမ်းထိန်းလိုက်သော နေမျိုး၏ လက်တစ်ဖက်က လေးနွယ်၏ ရင်သားမို့မို့တစ်ဖက်ကို သွား၍ အုပ်ကိုင်မိသည်။ မီးနှင့်ထိသော ဖယောင်းလို သူမတကိုယ်လုံး အရည်ပျော်ကျသွားသည်ဟု လေးနွယ် ခံစားလိုက်ရသည်။ ဘယ်လိုမှ မတ်မတ်မရပ်နိုင်ပဲ ရှေ့ ကိုထပ်တိုးသွားသည်တွင် နေမျိုး၏ ဘယ်ဘက်ရင်ခွင်ထဲသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ ကိုယ်ချင်း ပူးကပ်သွားသည့်အတွက် နှစ်ဦးသား မျက်နှာချင်းလဲ နီးစပ်ကုန်သည်။ လေးနွယ်က နေမျိုးကို ရီဝေစွာ မော်ကြည့်နေသလို နေမျိုးကလဲ လေးနွယ်ကို ညို့ ငင်စွာ ငုံ့ကြည့်နေပြန်သည်။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် သတိမထားလိုက်ခင်မှာပင် တလှုပ်လှုပ် တဆတ်ဆတ် ဖြစ်နေကြသော နှုတ်ခမ်းနှစ်ခု ပူးကပ်သွားသည်။ ဘာတွေ ဘယ်လို ဖြစ်ကုန်သည် လေးနွယ် စဉ်းစားလို့ မရတော့ပါ။ သူမ အသိဥာဏ်ထဲတွင် လောလောဆယ် ရှိနေသည်က နေမျိုး၏ နှုတ်ခမ်းထူထူများက ပေးသည့် အနမ်း၏ အရသာသာ ဖြစ်သည်။ လေးနွယ် ဘ၀တွင် အနမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရင်က အတွေ့အကြုံ ရှိဖူးသည့်တိုင် အခုလိုမျိုး နမ်းတာကိုတော့ တစ်ခါမှ မရဘူးပါ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော နေမျိုး၏ အနမ်းနောက်တွင် မျောပါနေမိသည့်အတွက် နေမျိုးက ဘလောက်စ်အင်္ကျီ၏ ကြယ်သီးများကို ဖြုတ်လိုက်တာရော၊ သူ့ ရှပ်လက်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်တာရော သတိမထားမိလိုက်။
သူက သူမကို မက်မက်မောမော နမ်းနေသလို၊ သူမကလဲ ရက်ရက်ရောရော တုံ့ပြန်မိနေလေရာ နမ်းလို့ အားရပြီဆိုသည့်အချိန်တွင် လေးနွယ်၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် အ၀တ်ဆိုလို့ အတွင်းခံတစ်စုံနှင့် ရင်ဘတ်ပွင့်နေသော ဘလောက်စ်အင်္ကျီတစ်ထည်သာ ရှိတော့သည်။ နေမျိုး၏ ကိုယ်ပေါ်တွင်မူ ဘာဆိုဘာမှ မရှိ်တော့ပဲ ပေါင်တန်ခွဆုံကြားတွင် အလံတိုင်ကြီးလို သူ့အချောင်းကြီးက မတ်မတ်ထောင်လျက်ရှိသည်။ အားရစရာ ကောင်းလှသည့် နေမျိုး၏ ပစ္စည်းကြီးကို မြင်လိုက်သည်နှင့် လေးနွယ် ကြက်သီးလေးများ ဖြန်းကနဲ ထပြီး ရွှေကျုတ်ထဲမှ ကျင်ခနဲတောင် ဖြစ်မိသည်။ စိတ်ရိုင်းတွေက ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်ကုန်ပြီမို့ ထွေထွေထူးထူး စဉ်းစားမိ မနေတော့ သူမလိုချင်သည်ကို ထုတ်၍ တောင်းဆိုမိသည်အထိ ဖြစ်သည်။ “ကျ .. ကျမကို ကောင်းကောင်း ချစ် ပေးပါ .. ရှင်ရယ် .. “ “လေး .. နွယ် .. “ သူမနာမည်ကို ရီဝေလှိုက်မောစွာ ခေါ်မိပြီးနောက် နေမျိုးတစ်ယောက် လေးနွယ်၏ ရှေ့ တွင် ဒူးထောက်ကာ ထိုင်ချလိုက်သည်။ တစ်စုံတစ်ခုကို လိုလားတက်မက်နေပြီ ဖြစ်သော လေးနွယ်၏ ညီမလေးသည် ယားယံ၍နေရာ နေမျိုးက သူ့အပေါ် ဖုံးကွယ်ထားသည့် ပင်တီကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်တွင် ကျေနပ်သဘောကျဟန်ှနှင့် အရည်ကြည်လေး တစ်ချို့တောင် စစ်ခနဲ ထုတ်ပေးနေသေးသည်။ နေမျိုးပုံစံက ဖိုမကိစ္စတွင် အတွေ့အကြုံ ရှိဟန်ရှိသည်။ သူမ၏ ရတနာပစ္စည်းလေးကို လက်မနှစ်ချောင်းသုံးကာ အသာအယာ ဖြဲယူလိုက်ပြီးနောက် ခေါင်းကို အပ်လိုက်သည်။ ဆီးစပ်အောက်ပိုင်းနှင့် သူ့မျက်နှာထိတွေ့သွားသည်နှင့် လေးနွယ် ရတနာလေး၏ အ၀ကို လျှာနွေးနွေးကြီး တစ်ခုက လာရောက် တို့ထိသည်။ “အ မေ … အာ့ … “ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပင် ကောင်းမွန်လှသော အရသာကြောင့် လေးနွယ် ကိုယ်လေးတစ်ခုလုံး ယ်ိမ်းထိုး၍ နေသည်။ ဓါတ်လှေကား နံရံတစ်ဖက်ကိုသာ မှီမထားဖြစ်လျှင် သူမကိုယ်လေး ပစ်လဲကျမှာ သေချာသလောက် ဖြစ်သည်။
နေမျိုးကလဲ လေးနွယ်၏ အခြေအနေကို မော့ကြည့်ပြီး အကဲခတ်နေသည်မို့ လေးနွယ် ကိုယ်လေး ပို၍ လှုပ်ရှားလေလေ သူ့လျှာကြီးကို တိုး၍ အလုပ်ပေးလေလေ ဖြစ်သည်။ တော်တော်လေး ကြာလာသည်တွင် လေးနွယ် ဘယ်လိုမှ အောင့်အီး၍ မနေနိုင်တော့။ နေမျိုးသာ နောက်ထပ် ဆက်လျက်ပေးလျှင် သူမ ပြီးသွားတော့မည်ဆိုတာ သိသည်။ သို့သော် ဒီလိုမျိုး ပြီးရမှာကို လေးနွယ် မလိုချင်။ မျက်စိထဲတွင် မြင်လိုက်ရသည့် နေမျိုး၏ အောင်မြင်သော အချောင်းကြီးနှင့်သာ ပြီးလိုက်ချင်သည်။ “နေ .. နေပါဦး … အင့် . “ “ပလတ် … ဘာဖြစ်လို့လဲ လေးနွယ် .. ကိုယ်လုပ်ပေးတာ မကောင်းလို့လား .. “ “ကောင်း တယ် … ဒါပေမယ့် .. ကျမ ရှင့်ဟာကြီးနဲ့ ဆောင့်ခံပြီး မှ ပြီးချင်လို့ “ မထူးတော့သည့် အဆုံး လေးနွယ် ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားပြီး အရဲစွင့်၍သာ ဖွင့်ပြောလိုက်ရသည်။ တော်သေးသည်။ နေမျိုးဆိုတဲ့ ယောက်ျားသားက နားလည်မှုရှိသည့်အတွက် သူမ နေရခက်လောက်မည့် မျက်နှာထားမျိုး ဖြစ်မသွား။ သူမပြောသည်ကို နားလည်သည့် သဘောနှင့် ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပြီး ဒူးထောက်ထိုင်နေရာမှ ထမည့်ဟန်ပြင်သည်။ “မ ထနဲ့ .. နေမျိုး .. အဲဒီမှာပဲ ပက်လက်အိပ်ပေးပါလား .. ကျမဖာသာ ကျမ လုပ်မယ့် … ရှင့်ဟာက ကြီးလို့လေ .. “ “ဟုတ် .. ဟုတ်ကဲ့ “ လေးနွယ်ပြောသည့်အတိုင်း အတိအကျ လိုက်နာပြီး နေမျိုး နေပေးလိုက်သည်။ ခြေထောက်ကို ဆန့်ဆန့်ဆင်းပေးထားပြီး ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုတော့ ဓါတ်လှေကားဘောင်ကို အမှီပြုထားသည်။ ဆီးစပ်တွင် မားမားမတ်မတ် ဖြစ်နေသည့် မြွေနဂါးကတော့ မကြာခင် တွင်းအသစ်လေးထဲ အောင်းရတော့မှာ သိနေသည့်အလား အမောက်ထောင်၍ ထကြည့်နေသည်။ အသည်းယားဖွယ်ကောင်းအောင် ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်နေသည့် အချောင်းကြီးကို လေးနွယ် ကြာကြာကြည့်မနေနိုင်တော့ပဲ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ကြမ်းပြင်တွေ ခွေ၍ချ၊ ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုတော့ ထောက်၍ ခပ်ကြွကြွ လုပ်ပြီးနောက် ထိပ်ဖူးနီတာရဲကြီးနှင့် သူမအ၀လေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သည်။
တစ်ချက် နှစ်ချက်လောက် မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် ပွတ်ဆွဲပြီးသည်နှင့် အပေါက်ဝနှင့် သေချာတေ့သည်။ လမ်းကြောင်းမှန်ပြီဆိုတာ လေးနွယ် နားလည်လိုက်သည်နှင့် တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို အောက်သို့ နှိမ့်ချသည်။ “အီး … ရှီး …” “အား … ရှစ် ..” နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူ အော်ကာ ညည်းလိုက်သလို ခေါင်းကိုယ်စီလဲ နောက်သို့လန်ကျသည်။ လိင်အင်္ဂါများ ပွတ်တိုက်ဆွဲမှုမှ ဖြစ်တည်လှသော အရသာက ကောင်းမွန်လှလေရာ လေးနွယ်တစ်ယောက် အနည်းငယ် အောင့်ကာ နာနေသည့်တိုင် ဂရုမစိုက်နိုင်တော့။ ဆက်၍ပင် တင်ပါးတွေကို ဖြေးဖြေးချင်း ဖိချလိုက်ရာ နောက်ဆုံးတွင်မူ နေမျိုး၏ လက်နက်ကြီးကို အောင်မြင်စွာ အုပ်စီးမိလိုက်နိုင်တော့သည်။ ထို့နောက်တွင်မူ လေးနွယ်တစ်ယောက် building maintenance တွေ ဓါတ်လှေကားရပ်နေသည်ကို သတိမထားမ်ိပါစေနှင့်ဟု စိတ်ထဲ ကြိတ်ဆုတောင်းပြီးနောက် မြင်းစီးခြင်း အလုပ်ကို ကောင်းကောင်းကြီး ပြုမူပါတော့သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့် အမျှ အ၀င်အထွက် ပြုလုပ်ရတာ ပို၍ ကောင်းမွန်လာပြီး နှစ်ဦးသား အင်္ဂါချင်း ရိုက်မိသံများက တဖတ်ဖတ် တဖွတ်ဖွတ်နှင့်ပင် အဆက်မပြတ်ကို မြည်နေလေသည်။ အောက်မှာ ရှိနေသူ နေမျိုးကိုယ်တိုင်လဲ ငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်တော့ပဲ လေးနွယ်၏ တင်ပါးနှစ်ဖက် အကျနှင့်အညီ ပင့်၍ ကော့ကော့တင်ပေးသည်။ အချက်ပေါင်း ဘယ်လောက် ဖြစ်သွားသည်တော့ လေးနွယ် သေချာ မမှတ်မိလိုက်။ သူမ သိသည်က သူမ တကိုယ်လုံး ကျင်ဆိမ့်ကာ တက်လာပြီး အရည်တွေထွက်ကျသွားချိန်တွင် နေမျိုး၏ လိင်တန်ထိပ်မှ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထွက်လာသည်ကိုသာ …။ “လေးနွယ် .. အချစ် .. ဟက်ပီး ဗယ်လင်တိုင်း ဒေးနော် .. ဟင်း .. ဟင်း “ “အင်း .. အ ဟင်း .. ဟင် … ဆိမ်းတူယူ ပါ ရှင်ရယ် .. “ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ပွေ့ဖက်ထားရင်းမှ အထက်ပါအတိုင်း ပြောမိကြသည့်နောက် နေမျိုးနှင့် လေးနွယ် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကြည်နူးစွာ စိုက်ကြည့်နေမိကြသည်။ နေမျိုး၏ အတွေးထဲတွင်တော့ ဒီနေ့သည် လေးနွယ်နှင့် အတူ သူ့ဘ၀တစ်သက်တာတွင် ဆင်နွှဲမည့် ဗယ်လင်တိုင်းဒေးများ၏ ပထမဆုံးနေ့ဟု သတ်မှတ်ထားလိုက်သည်။ ထို့အပြင် နောက်နှစ်ခါ အခုလိုအချိန်တွင် ဓါတ်လှေကား မရပ်ရပ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမည်ဆိုတာကိုလဲ ကြိုတင်စဉ်းစားရင်း အကြံထုတ်နေရှာတော့သည်…..ပြီး။